ကြိုးစားခြင်းမသေဘဲ Kubuntu 14.04 တွင် Breeze ထည့်သွင်းပါ Linux မှ
ကြိုးစားမှုမသေဘဲ Kubuntu 14.04 တွင် Breeze ထည့်သွင်းပါ
FromLinux တွင်ကျွန်ုပ်တို့ install လုပ်ပုံကိုပြသည် လေချို (အသစ် အနုပညာလက်ရာများ ArchLinux နှင့် KDE စတိုင် ၅) နှင့်တူသည်။ သို့သော်အချို့သောဖြန့်ချိမှုများသည် Kubuntu သို့မဟုတ် Fedora ကဲ့သို့သော repositories တွင်လိုအပ်သော package မရှိပါ။ ဒီ post ကိုငါဘာလုပ်မယ်ဆိုတာမသေချာဘူး Kubuntu မှာ Breeze ကိုဘယ်လိုတပ်ဆင်ရမယ်ဆိုတာပြပေးပါလိမ့်မယ်။
1 Kubuntu မှာ Breeze ထည့်သွင်းနည်း။
2 Kubuntu on Breeze ကိုဘယ်လိုဖယ်ထုတ်မလဲ။
Kubuntu မှာ Breeze ထည့်သွင်းနည်း။
Archubinux ကပေးထားတဲ့ package ကိုသုံးပြီး Kubuntu မှာ Breeze ကို install လုပ်ပါမယ်။ အနာဂတ်၌ဤသင်ခန်းစာသည်အလုပ်မလုပ်နိုင်၊ သို့မဟုတ်သင်ကျွန်ုပ်တို့ download လုပ်မည့် package များကို update လုပ်လျှင် link များသည်ပြောင်းလဲသွားလိမ့်မည်။
ပထမဆုံးအနေနဲ့ package ကို install လုပ်ထားဖို့လိုပါတယ် xz-utils ကျွန်ုပ်တို့ဒေါင်းလုပ်လုပ်မည့်ဖိုင်များကို decompress လုပ်ရန်။ ယခုကျွန်ုပ်တို့သည် terminal ကိုဖွင့ ်၍ အပြီးသတ်လုပ်ဆောင်မည်။
mkdir ~ / လေပြေလေညင်း cd ~ / လေပြေလေညှင်း /
ယခုဖိုင်တွဲအတွင်း၌ကျွန်ုပ်တို့ ArchLinux repositories မှ package များကို download လုပ်သည်။
wget -c http://mirror.gnomus.de/extra/os/i686/breeze-5.1.1-1-i686.pkg.tar.xz && wget -c http://mirror.gnomus.de/extra/ os / i686 / လေပြေ -kde4-5.1.1-1-i686.pkg.tar.xz
ယခုငါတို့သူတို့ကို unzip လုပ်ရန်သွားသည်။
ရလဒ်အနေဖြင့် Breeze အတွင်း၌ usr ဟုခေါ်သောဖိုင်တွဲတစ်ခုရရှိလိမ့်မည်။ လိုအပ်သောဖိုင်များကိုကူးယူပြီးပြီ။
cd usr / lib / sudo cp -Rv kconf_update_bin / / usr / lib / sudo cp -Rv kde4 / / usr / lib / sudo cp -Rv qt / * / usr / lib / qt4 / sudo cp -Rv qt4 / / usr / lib / cd ../share/ sudo cp -Rv app များ / usr / share / sudo cp -Rv အရောင်အသွေး / usr / share / sudo cp -Rv icon များ / usr / share / sudo cp -Rv kconf_update / usr / share / sudo cp -Rv kservices5 / usr / share / sudo cp -Rv kstyle / usr / share / sudo cp -Rv kwin / usr / share / sudo cp -Rv ဒေသ / usr / share / sudo cp -Rv QtCurve / usr / share / sudo cp -Rv wallpapers / usr / share /
ဤနည်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့စနစ်တွင်ရရှိနိုင်သည့်စတိုင်ရှိသည်။ ငါတို့သွားမယ် ဦး စားပေးမှုများ» Application များ၏ပုံပန်းသဏ္»ာန်»စတိုင် ကျနော်တို့ Breeze ကိုရွေးပါ။
ထိုချစ်လှစွာသောမိတ်ဆွေများအားလုံးပါပဲ။ ဤနည်းအားဖြင့် Breeze ကိုသူတို့ repositories တွင်မလိုအပ်သော package များ၌ထည့်သွင်းနိုင်သည်။
Kubuntu on Breeze ကိုဘယ်လိုဖယ်ထုတ်မလဲ။
အိုကေ၊ ခင်ဗျားကကျွန်တော့်ကို Install Breeze သွင်းဖို့သင်ပေးတယ်၊ အခုငါအဲဒါကို uninstall လုပ်ချင်တယ်
ကောင်းပြီ၊ အခြေခံအားဖြင့်တော့ပြောင်းပြန်ဖြစ်စဉ်ကိုကျွန်တော်တို့လုပ်မယ်။ / usr / share နှင့် / usr / lib ဖိုင်တွဲများကိုသိမ်းဆည်းပါ
chmod တစ် + x ကို ClearBreeze.sh
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » အသွင်အပြင် / ကိုယ်ပိုင် » ကြိုးစားမှုမသေဘဲ Kubuntu 14.04 တွင် Breeze ထည့်သွင်းပါ
ငါအမြဲတမ်း kde နှင့်အတူအမြဲတမ်းမေးခွန်းတစ်ခုရှိခဲ့ဖူးသည်၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်၎င်း၏ default style များသည် binary မဟုတ်ဘဲတည်းဖြတ်နိုင်သောဖိုင်များမဟုတ်သောကြောင့် linux ထဲတွင်ရှိသကဲ့သို့?
ငါ Breeze အသေးစိတ်ကိုပြောင်းလဲချင်တယ်ဆိုပါစို့။ ဒီအခင်းအကျင်းဟာ .so စာကြည့်တိုက်တစ်ခုအနေနဲ့တည်ရှိပြီး QSS စတိုင်များလိုမဟုတ်ဘဲ QT နှင့် QML အကြောင်းပြောတဲ့အခါလုပ်သင့်လုပ်ထိုက်သောအရာဖြစ်လိမ့်မယ်။
ကျန်ရှိနေသေးသောအရာသည် source code ကိုကိုင်ထားရန်ဖြစ်သည်။ သို့သော်မူရင်းစတိုင်ကို binaries များဖြင့်အဘယ်ကြောင့်ရေးသားရမည်ကိုကျွန်ုပ်နားမလည်သေးပါ။
Inti Alonso အားစာပြန်ပါ
ငါကရိုးရိုးသားသားမသိဘူး၊ ဒါပေမဲ့သူတို့ကိုမြန်မြန်ဆန်ဆန်ပြေးနိုင်အောင်ငါလုပ်မယ်လို့ထင်တယ်။ အောက်စီဂျင်သည် QtCurve သို့မဟုတ် QtCurve themes များထက်များစွာပိုမြန်သည်။
KDE configuration ဖိုင်များသည်ရိုးရှင်းသောစာသားဖိုင်များဖြစ်သည် (အနည်းဆုံး Kubuntu တွင်) ~ / .kde / share / config တွင်
ငါအမြင်အာရုံဆောင်ပုဒ်သူ့ဟာသူဖိုင်တွေကိုရည်ညွှန်းခဲ့သည်မဟုတ် setting များကို။
ဥပမာအားဖြင့်၊ အောက်ဆီဂျင် (သို့) Breeze ရှိပုံရိပ်များ၏ "margin" သို့မဟုတ် "padding" ကိုဘယ်မှာလဲ။ gtk တွင်အကြောင်းအရာများသည်သင်ဖွင့ ်၍ ပြန်လည်ကြည့်ရှုခြင်းသို့မဟုတ်ပြုပြင်ခြင်းပြုလုပ်နိုင်သည့်စာသားဖိုင်များဖြစ်သည်။ QT တွင်သင်ဖတ်ရှု။ ပြုပြင်နိုင်သည့် QSS စတိုင်များကိုအသုံးပြုသင့်သည်၊ သို့သော် KDE သည်ပုံမှန် themes များကိုလုံးဝပိတ်ထားသည်။
ငါပြောခဲ့သလိုပဲ၊ မင်းရဲ့ system ကိုစစ်ဆေးကြည့်မယ်ဆိုရင် Breeze ဟာ .so library လိုပဲ Oxygen လိုစာကြည့်တိုက်ဆိုတာမြင်လိမ့်မယ်။
kubuntu ဖြစ်ခြင်းအချို့ ppa ထံမှမဖြစ်နိုင်?
#dnf copr dvratil / plasma-5 ကို enable
plasma-breeze-kde4 ကို install လုပ်ပါ
ထို့နောက်သင် repo ကိုသိမ်းဆည်းနိုင်သည် (သို့) ၎င်းကို uninstall လုပ်နိုင်သည်။
#dnf copr dvratil / plasma-5 ကို disable လုပ်ပါ
မင်္ဂလာပါ၊ အလွန်ကောင်းတဲ့ပို့စ်၊ ကျွန်ုပ်တွင်မေးမြန်းချက်တစ်ခုသာရှိပါသည်။ ကျွန်ုပ်၏ ၀ င်းဒိုးစတိုင်၊ ပိတ်ရန်၊ အနိမ့်အမြင့်လုပ်ရန်ခလုတ်များကိုအဆုံးသတ်ထားသည်။ အဆုံးတွင်လှည့်လည်ကြည့်ရှုစစ်ဆေးပြီးငါနှင့်မည်သို့တူသနည်း။ မင်းရဲ့ post အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ ငါအမြဲတမ်းသူတို့နဲ့အမြဲတမ်းရှိနေမှာပါ။ မင်္ဂလာပါ
အရာအားလုံးမှလွဲ။ အခြားအရာအားလုံးပြောင်းလဲသွားသည်။ u_úမှားယွင်းနေသည်
ဟင့်အင်း၊ KDE-Look of သည်သင်ထုတ်သောခေါင်းစဉ်ဖြစ်သည်
အဲဒါ YosiWhite လား။
ငါဒီအလုပ်မလုပ်တော့ဘူးလို့ထင်တယ်၊ အဲဒါက ၃၂ နဲ့ ၆၄ နှစ်လုံးလုံးဒေါင်းလုပ်လုပ်ရမှာဖြစ်တဲ့ဖိုင်တွေအားလုံးကိုငါ့ကို ၄၀၄ ချလိုက်တယ်။ ငါဖြစ်တာတခုတည်းလား။